သူရဲ၊ တစ္ဆေ တွေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်လို့ ပြောပြလာတဲ့ အမျိုးသမီး (၁၀)ယောက် | Buzzy
သူရဲ၊ တစ္ဆေ တွေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်လို့ ပြောပြလာတဲ့ အမျိုးသမီး (၁၀)ယောက်
နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ သူတွေအများအပြားကလည်း ယခု လို သူရဲ တွေနဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို ယုံကြည်မှု ရှိနေကြပါတယ်...
သူမကတော့ တကယ့်သူရဲနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခဲ့တာလို့ ပြောနေပါတယ်။ သူမတွေ့ခဲ့တဲ့သူရဲကတော့ Robert လို့ ဖော်ပြထားတာပါ။ သူမပြောထားတာကတော့ အဲ့ဒီသူရဲဟာ အလွန်ကို လှကြောင်း ၊မျက်လုံးများကလည်းတောက်ပကြောင်းပြောထား တာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူမနဲ့ Robert တို့ ရဲ. ဇာတ်လမ်းက ကြာရှည်မခံဘူးလို့ ပြောလာပါတယ်။
သူမကတော့ တကယျ့သူရဲနဲ့ လိငျဆကျဆံခဲ့တာလို့ ပွောနပေါတယျ။ သူမတှခေဲ့တဲ့သူရဲကတော့ Robert လို့ ဖျောပွထားတာပါ။ သူမပွောထားတာကတော့ အဲ့ဒီသူရဲဟာ အလှနျကို လှကွောငျး ၊မကျြလုံးမြားကလညျးတောကျပကွောငျးပွောထား တာပါ။ ဒါပမေဲ့ သူမနဲ့ Robert တို့ ရဲ. ဇာတျလမျးက ကွာရှညျမခံဘူးလို့ ပွောလာပါတယျ။
သူမပြောထားတာကတော့ သူမရဲ. သေဆုံးပြီးသော အမျုိးသားဟာ သူမနဲ့ အတူ ပြန်လာပြီး လိင်ဆံဆက်မှု ကို ပြု ခဲ့တယ်လို့ ပြောထားတာပါ။သူမဟာ အဲ့ဒီလို တွေ့ ကြုံ နေရခြင်းဟာ ဘယ်လို ခံစားရမှန်းမသိဘူးလို့ ပြောပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ တကယ့် အိမ်မက် မဟုတ်သည့်အတွက် အိပ်လို့ လည်းကောင်းပြီး နေလို့ လည်းသဘ၀အတိုင်းပါ ပဲလို့ ပြောထားတာပါ။
သူမပွောထားတာကတော့ သူမရဲ. သဆေုံးပွီးသော အမြိုးသားဟာ သူမနဲ့ အတူ ပွနျလာပွီး လိငျဆံဆကျမှု ကို ပွု ခဲ့တယျလို့ ပွောထားတာပါ။သူမဟာ အဲ့ဒီလို တှေ့ ကွုံ နရေခွငျးဟာ ဘယျလို ခံစားရမှနျးမသိဘူးလို့ ပွောပါ တယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒါဟာ တကယျ့ အိမျမကျ မဟုတျသညျ့အတှကျ အိပျလို့ လညျးကောငျးပွီး နလေို့ လညျးသဘဝအတိုငျးပါ ပဲလို့ ပွောထားတာပါ။
လူတိုင်းကတော့ ပျော်ရွှင်ချင်ကြပါတယ်။Ann Elizabeth ကတော့ သူရဲနဲ့ အတူနေရတာဟာ အလွန်ကို ထိန့် လန့် ဖွယ်ကောင်းကြောင်းပြောထားပါတယ်။တစ်နေ့ သူမဟာ အိပ်ယာထဲအိပ်နေစဉ် မှာ သူရဲတစ်ကောင်ကသူမနဲ့လာ ပြီးလိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြောင်းပြောထားသည်။သူမမျက်လုံးတွေကို မှိတ်လိုက်တဲ့အခါ အားကောင်းပြီးသန်မာတဲ့ ယောက်ျား တစ်ယောက် ရဲ. ပခုံးကို မြင်လိုက်ကြောင်းရေးထားသည်။
လူတိုငျးကတော့ ပြျောရှငျခငျြကွပါတယျ။Ann Elizabeth ကတော့ သူရဲနဲ့ အတူနရေတာဟာ အလှနျကို ထိနျ့ လနျ့ ဖှယျကောငျးကွောငျးပွောထားပါတယျ။တဈနေ့ သူမဟာ အိပျယာထဲအိပျနစေဉျ မှာ သူရဲတဈကောငျကသူမနဲ့လာ ပွီးလိငျဆကျဆံခဲ့ကွောငျးပွောထားသညျ။သူမမကျြလုံးတှကေို မှိတျလိုကျတဲ့အခါ အားကောငျးပွီးသနျမာတဲ့ ယောကျြား တဈယောကျ ရဲ. ပခုံးကို မွငျလိုကျကွောငျးရေးထားသညျ။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို အင်တာဗျူး မှာ သူရဲအကြောင်းမေးမြန်းခဲ့တဲ့ အခါ Joy ဆိုတဲ့ အမျိုး သမီးဟာ သူရဲနဲ့ အတူ လိင်ဆက်ဆံ မှု ရှိခဲ့ ကြောင်း ပြောပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ နတ်ဆိုး တွေဟာ သူမဆီကို အလည်လာတာလား ဒါမှမဟုတ် သူမနဲ့ တကယ်ပဲ လိင်ဆက်ဆံခဲ့သလားဆိုတာကို တော့ မခန့် မှန်းနိုင်ပါဘူး။ သူမကတော့ အလွန်ကို သာယာနေတယ်လို့ ပြောထားပြီး တကယ့်ကို အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ အမှန်တကယ် လိင်ဆက်ဆံနေသလိုခံစားရတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
အမြိုးသမီးတဈယောကျကို အငျတာဗြူး မှာ သူရဲအကွောငျးမေးမွနျးခဲ့တဲ့ အခါ Joy ဆိုတဲ့ အမြိုး သမီးဟာ သူရဲနဲ့ အတူ လိငျဆကျဆံ မှု ရှိခဲ့ ကွောငျး ပွောပွထားပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ထူးဆနျးတဲ့ နတျဆိုး တှဟော သူမဆီကို အလညျလာတာလား ဒါမှမဟုတျ သူမနဲ့ တကယျပဲ လိငျဆကျဆံခဲ့သလားဆိုတာကို တော့ မခနျ့ မှနျးနိုငျပါဘူး။ သူမကတော့ အလှနျကို သာယာနတေယျလို့ ပွောထားပွီး တကယျ့ကို အမြိုးသားတဈယောကျနဲ့ အမှနျတကယျ လိငျဆကျဆံနသေလိုခံစားရတယျလို့ ပွောထားပါတယျ။
Laura Hale ဟာ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ သူရဲတွေဟာ သူမဆီကို လာပြီး အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံ ခဲ့ကြောင်း ပြောထားပါတယ်။ သူမအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာ သူမဆီသို့ လာပြီး သူမအိပ်ယာထဲမှာ အတူအိပ်ခဲ့ကြောင်းပြောထားပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး နေလို့ မကောင်းသလို ခံစားရတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ တော့ သူမရဲ. အမျိုး သားနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားရသလိုမျိုး ကို ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ ပြောထား တာပါ။ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စ မှန် သလား မှား သလားတော့ အတိအကျမသိနိုင်ပါဘူး။
Laura Hale ဟာ အသကျ ၃၂ နှဈအရှယျအမြိုးသမီးတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ သူမကတော့ သူရဲတှဟော သူမဆီကို လာပွီး အမှနျတကယျလိငျဆကျဆံ ခဲ့ကွောငျး ပွောထားပါတယျ။ သူမအိပျပြျောနတေဲ့အခြိနျမှာ သူမဆီသို့ လာပွီး သူမအိပျယာထဲမှာ အတူအိပျခဲ့ကွောငျးပွောထားပါတယျ။ ဒီလိုကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး နလေို့ မကောငျးသလို ခံစားရတယျလို့ ပွောထားပါတယျ။ တဈခါတဈရံမှာ တော့ သူမရဲ. အမြိုး သားနဲ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာခံစားရသလိုမြိုး ကို ပေးနိုငျစှမျးရှိတယျလို့ ပွောထား တာပါ။ဒါပမေဲ့ ဒီကိစ်စ မှနျ သလား မှား သလားတော့ အတိအကမြသိနိုငျပါဘူး။
ဒိုင်နိုဆောပုံစံနဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးနှင့်အတူ လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြောင်းပြောပြတဲ့ စာကို ရေးထားတဲ့ မိန်းကလေးတစ် ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမည်မသိရတဲ့ စာရေးဆရာတွေရဲ. ရေးထားတာကတော့သူမဟာ မကောင်းဆိုးဝါးနှင့်အတူ လိင်ဆံက် ဆံ ရာမှာ တော့ အချိန် အကြာ ကြီး ပြု မူ ခဲ့တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။တစ်ညမှာ မကောင်းဆိုးဝါးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရင်းနဲ့ သူမရဲ. တစ်ကိုယ်လုံးနာကြင်လာတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
ဒိုငျနိုဆောပုံစံနဲ့ မကောငျးဆိုးဝါးနှငျ့အတူ လိငျဆကျဆံခဲ့ကွောငျးပွောပွတဲ့ စာကို ရေးထားတဲ့ မိနျးကလေးတဈ ယောကျဖွဈပါတယျ။ အမညျမသိရတဲ့ စာရေးဆရာတှရေဲ. ရေးထားတာကတော့သူမဟာ မကောငျးဆိုးဝါးနှငျ့အတူ လိငျဆံကျ ဆံ ရာမှာ တော့ အခြိနျ အကွာ ကွီး ပွု မူ ခဲ့တယျလို့ ပွောထားပါတယျ။တဈညမှာ မကောငျးဆိုးဝါးနဲ့ လိငျဆကျဆံရငျးနဲ့ သူမရဲ. တဈကိုယျလုံးနာကွငျလာတယျလို့ ပွောထားပါတယျ။
မုဆိုးမ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ဟာ New Hampshire ရဲ. trailer ပန်းခြံထဲမှာ သူမရဲ. သမီးနှင့်အတူ နေထိုင် နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ ပုံမှ န် အားဖြင့် ယခုဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ထူးဆန်းတဲ့ အတွေ့ အကြုံ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြထားပါတယ်။ညပိုင်းမှာ သူမအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန် မှာ သူမကို တစ်စုံတစ်ယောက်က လိင်ဆက်ဆံနေသလို မျိုး အဖြစ် တွေ့ မြင်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲ သူမရဲ. အပေါ်ကို လည်း အလေးချိန် တစ်စုံတစ်ခု ကဖိထားသလိုမျိုး ခံစားခဲ့ရပြီး အိပ်ယာထဲမှာလည်း သူမတစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေတာကို ချက်ချင်းသတိထားမိလိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူမဟာ မည်သည့်စကားလုံးမှ မပြော နိုင်ပဲ ပြန်လည်အိပ်ပျော် သွားခဲ့ပြီး မနက်လင်းချိန်မှာ အားလုံးကို သတိရနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ဖြစ်တာမျိုး ကို တော့ လူပေါင်းများစွာ ဖြစ်ဖူးတယ်လို့ အမည်မဖော်လို တဲ့စာရေးဆရာတစ်ယောက်ကလည်း ပြောထားပါတယ်။
မုဆိုးမ အမြိုးသမီးကွီးတဈယောကျဟာ New Hampshire ရဲ. trailer ပနျးခွံထဲမှာ သူမရဲ. သမီးနှငျ့အတူ နထေိုငျ နတောပဲဖွဈပါတယျ။သူမဟာ ပုံမှ နျ အားဖွငျ့ ယခုဖွဈရပျနဲ့ ပတျသကျလို့ ထူးဆနျးတဲ့ အတှေ့ အကွုံ ဖွဈကွောငျး ပွောပွထားပါတယျ။ညပိုငျးမှာ သူမအိပျပြျောနတေဲ့အခြိနျ မှာ သူမကို တဈစုံတဈယောကျက လိငျဆကျဆံနသေလို မြိုး အဖွဈ တှေ့ မွငျခဲ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုပဲ သူမရဲ. အပျေါကို လညျး အလေးခြိနျ တဈစုံတဈခု ကဖိထားသလိုမြိုး ခံစားခဲ့ရပွီး အိပျယာထဲမှာလညျး သူမတဈယောကျထဲဖွဈနတောကို ခကျြခငျြးသတိထားမိလိုကျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ သူမဟာ မညျသညျ့စကားလုံးမှ မပွော နိုငျပဲ ပွနျလညျအိပျပြျော သှားခဲ့ပွီး မနကျလငျးခြိနျမှာ အားလုံးကို သတိရနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အဲ့ဒီလို ဖွဈတာမြိုး ကို တော့ လူပေါငျးမြားစှာ ဖွဈဖူးတယျလို့ အမညျမဖျောလို တဲ့စာရေးဆရာတဈယောကျကလညျး ပွောထားပါတယျ။
New Jerseyမှာ နေထိုင်စဉ် အတွင်း သူမဟာ Manhattan မှာ အလုပ်လုပ်သည့်အတွက် အလွန်ကို အိမ်ပြန်တာနောက်ကျတတ်ပါတယ်။ သူမဟာ မနက်ပိုင်း ၅ နာရီလောက်မှာ သူမရဲ. အိပ်ယာထဲမှာ မကောင်းဆိုး ၀ါးနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ သူမပြောတာကတော့ လေထဲမှာ ပျံဝဲနေရသလိုမျိုး ထိတွေ့ ခံစားခဲ့ရတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ အခန်းကလည်းမှောင်မိုက်နေသလို ခံစားခဲ့ရပြီး သူမရဲ. လက်တွေခြေထောက်တွေ ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အထိတွေ့ မျိုးတွေနှင့်အတူ တစ်စုံတစ်ခုက ချည်နှောင်ထားသလို ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူမဟာ အဲ့ဒီလို အခြေအနေမျိုး မှာ အလွန်ကို ပျော် ရွှင်ကျေနပ်မှု ရရှိခဲ့တယ်လို့ လည်းပြောထားပါတယ်။ သူမကို တကယ့်လူတစ်ယောက်က အမှန်တကယ် kiss ပေးနေသလို ခံစားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်တော့ သူမရဲ.နှလုံး ခုန်သံတွေလည်း မြင့်တက်လာပြီး အမှန်တကယ်လူ တစ်ယောက်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေရ သလို ခံစားခဲ့ ရကြောင်းရှင်းပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
New Jerseyမှာ နထေိုငျစဉျ အတှငျး သူမဟာ Manhattan မှာ အလုပျလုပျသညျ့အတှကျ အလှနျကို အိမျပွနျတာနောကျကတြတျပါတယျ။ သူမဟာ မနကျပိုငျး ၅ နာရီလောကျမှာ သူမရဲ. အိပျယာထဲမှာ မကောငျးဆိုး ၀ါးနှငျ့အတူနထေိုငျခဲ့ကွောငျးပွောခဲ့ပါတယျ။ သူမပွောတာကတော့ လထေဲမှာ ပြံဝဲနရေသလိုမြိုး ထိတှေ့ ခံစားခဲ့ရတယျ လို့ ဆိုပါတယျ။ အခနျးကလညျးမှောငျမိုကျနသေလို ခံစားခဲ့ရပွီး သူမရဲ. လကျတှခွေထေောကျတှေ ဟာ ကောငျးမှနျတဲ့ အထိတှေ့ မြိုးတှနှေငျ့အတူ တဈစုံတဈခုက ခညျြနှောငျထားသလို ခံစားခဲ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ သူမဟာ အဲ့ဒီလို အခွအေနမြေိုး မှာ အလှနျကို ပြျော ရှငျကနြေပျမှု ရရှိခဲ့တယျလို့ လညျးပွောထားပါတယျ။ သူမကို တကယျ့လူတဈယောကျက အမှနျတကယျ kiss ပေးနသေလို ခံစားရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ နောကျတော့ သူမရဲ.နှလုံး ခုနျသံတှလေညျး မွငျ့တကျလာပွီး အမှနျတကယျလူ တဈယောကျနဲ့ လိငျဆကျဆံနရေ သလို ခံစားခဲ့ ရကွောငျးရှငျးပွထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ ၂၀၁၀ တုန်းကပဲဖြစ်ပါတယ်။Florida ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ရေးခဲ့တဲ့ စာတမ်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ. ထူးဆန်းတဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ် ဆန်ဆန် ပြောပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမပြောထားတာကတော့ အိမ်မှာ ခွေးနှစ်ကောင်နှင့် သစ်ပင်တွေဝိုင်းနေတဲ့ သူမတို့ ရဲ. အိမ်ထဲမှာ အတူနေ နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ဟာသူမနဲ့ အတူ လိင်ဆက်ဆံ တာကို မြင်ရကြောင်းပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် မကောင်းဆိုးဝါး ဟာ တဖြေဖြေးနဲ့ ကြီးလာသလိုထင်ရတယ်လို့ ရေး ထားပါတယ်။
ဒီဖွဈရပျကတော့ ၂၀၁၀ တုနျးကပဲဖွဈပါတယျ။Florida ကအမြိုးသမီးတဈယောကျက ရေးခဲ့တဲ့ စာတမျး ပဲဖွဈပါတယျ။သူမရဲ. ထူးဆနျးတဲ့ အတှေ့ အကွုံတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ ပုံပွငျတဈပုဒျ ဆနျဆနျ ပွောပွထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမပွောထားတာကတော့ အိမျမှာ ခှေးနှဈကောငျနှငျ့ သဈပငျတှဝေိုငျးနတေဲ့ သူမတို့ ရဲ. အိမျထဲမှာ အတူနေ နတောပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ မကောငျးဆိုးဝါးတဈကောငျဟာသူမနဲ့ အတူ လိငျဆကျဆံ တာကို မွငျရကွောငျးပွောထားပါတယျ။အဲ့ဒီနောကျ မကောငျးဆိုးဝါး ဟာ တဖွဖွေေးနဲ့ ကွီးလာသလိုထငျရတယျလို့ ရေး ထားပါတယျ။
အမည် မဖော်လို လိုတဲ့ စာရေးဆရာမ တစ်ယောက်က မကောင်းဆိုးဝါးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်းပြ နေတာပါ။မကောင်းဆိုးဝါးတွေဟာ လိင်ကိစ္စ တွေကို ဘယ်လိုပြု မူ ကြတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောပြထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နက်ဆိုးတစ်ကောင်ဖြစ်ဖို့ တော့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒီဟာက အချိန်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ ပုံပြင် တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ညအချိန်မှာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေဟာ နတ်ဆိုးတစ်သိုက်နဲ့ အတူ အစာရှာ ထွက်လှေ့ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အလည် ထွက်တဲ့အခါမှာ စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ဆီကို သွားလည်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီစာရေး ဆရာမ တစ်ယောက် အိပ်ယာထဲအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာ သူမရဲ. ဘေးနားမှာ ရောက်ရှိနေ တဲ့အကြောင်း ပြောထားတာပါ။ ပါ။အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာ သူမဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ထိတွေ့ ခံစားမှု မျိုးကို ခံစားရပြီး နေတိုင်းသူမအိမ်ကို လာလည်ဖိုသူ့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အမညျ မဖျောလို လိုတဲ့ စာရေးဆရာမ တဈယောကျက မကောငျးဆိုးဝါးတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ ရှငျးပွ နတောပါ။မကောငျးဆိုးဝါးတှဟော လိငျကိစ်စ တှကေို ဘယျလိုပွု မူ ကွတယျဆိုတာတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ ပွောပွထားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ နကျဆိုးတဈကောငျဖွဈဖို့ တော့မလှယျကူပါဘူး။ဒီဟာက အခြိနျကွာမွငျ့နပွေီဖွဈတဲ့ ပုံပွငျ တဈခုဖွဈနိုငျပါတယျ။ ညအခြိနျမှာ မကောငျးဆိုးဝါးတှဟော နတျဆိုးတဈသိုကျနဲ့ အတူ အစာရှာ ထှကျလှေ့ ရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီလို အလညျ ထှကျတဲ့အခါမှာ စာရေးဆရာမတဈယောကျဆီကို သှားလညျတာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီစာရေး ဆရာမ တဈယောကျ အိပျယာထဲအိပျပြျောနတေဲ့အခြိနျမှာ သူမရဲ. ဘေးနားမှာ ရောကျရှိနေ တဲ့အကွောငျး ပွောထားတာပါ။ ပါ။အဲ့ဒီလိုအခြိနျမှာ သူမဟာ ကောငျးမှနျတဲ့ထိတှေ့ ခံစားမှု မြိုးကို ခံစားရပွီး နတေိုငျးသူမအိမျကို လာလညျဖိုသူ့ ဖိတျချေါခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။